सरकारले फिर्ता बोलाइसकेका खतिवडाले नै फेरि राजदूत बन्दैछन् ? अमेरिकामै काँग्रेस नेतासँग अनौठो भेट ! – GALAXY
सरकारले फिर्ता बोलाइसकेका खतिवडाले नै फेरि राजदूत बन्दैछन् ? अमेरिकामै काँग्रेस नेतासँग अनौठो भेट !
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ११ वटा मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको एक साता बित्दै लाग्दा समेत उनीहरु कार्यक्रममा सहभागि भइरहेको पाइएको छ । गत साता सरकारले ३ हप्ताभित्र आइपुग्ने गरी अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.युवराज खतिवडा सहितलाई स्वदेश फिर्ता बोलाइएको थियो ।
तर, केही राजदूत फर्किने तरखरको सट्टा विभिन्न स्वागत कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् । त्यो क्रममा अहिले सबैभन्दा अगाडि देखिएका हुन् ।
उनले शनिवार मासाचुसेट्स राज्यका राज्य प्रतिनिधिहरु (काँग्रेस) सँग औपचारिक भेटघाट गरेका छन् ।